Chlamydia amin'ny vehivavy - soritr'aretina, fitsaboana. Chlamydia amin'ny vehivavy - ny anton'ny fanombohana. Fandinihana ny klamady amin'ny vehivavy - ahoana no haka?
Chlamydia amin'ny vehivavy - famantarana sy fitsaboana ary fitsaboana tsara indrindra
Chlamydia dia manondro aretina vokatry ny firazanana. Amin'io tranga io, matetika dia misy fiantraikany eo amin'ny taova hafa ny mikraoba: ny mokaa amin'ny trakta momba ny taovam-pisefoana, ny fo sy ny ra, ny taolana. Andao hodinihintsika amin'ny antsipiriany hoe ahoana no mahatonga ny chlamydia amin'ny vehivavy, ny soritr'aretina, ny fisehoan-javatra ary ny fomba fitsaboana.
Chlamydia amin'ny vehivavy - ny antony
Ny aretina Chlamydia amin'ny vehivavy dia matetika mifandray amin'ny aretin'ny rafi-pitondrana. Ny taovam-pananahana dia mihatra matetika kokoa. Izany dia vokatry ny endrika anatomika. Anisan'ny antony lehibe mahatonga ny aretina, ny dokotera dia miantso ny tsy fisian'ny mpiara-miombon'antoka ara-dalàna, firaisana ara-nofo mahazatra. Ankoatra izany, ny fampandrosoana ny patolojia dia manampy:
fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fahadiovam-pitondrantena;
fanalefahana ny famindram-po ao an-toerana;
Fanatrehana aretina mitaiza ny trakta urogenital.
Ahoana no ampitan'ny klamido amin'ny vehivavy?
Vantany vao fantarina ilay aretina, matetika dia liana amin'ny dokotera ny marary mikasika ny làlan-drivotra. Noho izany, ny fanontaniana dia mipoitra amin'ny hoe aiza no misy ny chlamydia avy amin'ny vehivavy. Ny lalan'ny fifindrana dia firaisana ara-nofo. Amin'ny marary iray, ny chlamydia mandritra ny firaisana ara-nofo dia mandeha amin'ny salama. Amin'ity tranga ity dia miankina amin'ny fomba fifandraisana am-pirahalahiana ny fizotry ny fizotry ny aretina: ny lahy sy ny vavy. Amin'ny fomba hafa amin'ny fifindrana:
Ny lalana avo lenta no faharoa. Voalaza fa rehefa mihetsika ilay reny mitondra aretina amin'ny zaza, ilay aretina. Azo atao izany amin'ny fizotran'ny fiterahana, ny andalan-jazakely amin'ny alalan'ny lakandrano. Vokatr'izany, ny zaza vao teraka dia mampivelatra ny konjunktivitis malemy, ny voan'ny androbe amin'ny havokavoka dia voakasika. Ny dokotera dia tsy manaisotra ny mety hisian'ny aretina sy ny zaza ao am-bohoka. Saingy raha ny marina dia tsy voamarika izany.
Ny fifandraisana amin'ny ankohonana dia tsy ambany noho ny ofisialy. Na izany aza, noho ny toetra mampiavaka ny mpikarakara, ny dokotera dia tsy manilika ny fahafahana mandefitra ilay aretina amin'ny alalan'ny fitaovana fidiovana ankapobeny, ny zavatra ao an-tokantrano: ny fanaka fidiovana, ny lamba matevina. Hitany fa manana herim-pitondrantena avo lenta ny chlamydia - afaka mitandrina asa maharitra hatramin'ny 2 andro ao anaty akanjo.
Air-droplet - dia mahazatra amin'ny endrika patolojia, toy ny pnemonia chlamydial.
Chlamydia - vanim-potoana fanatsarana
Chlamydia amin'ny vehivavy voan'ny otrikaretina, tsy azo tsidihana avy hatrany. Izany dia vokatry ny fisehon'ny fivoaran'ny micro microorganism. Misy vanim-potoana fanatsarana - ny fotoana avy amin'ny fidirana amin'ny rajako ao amin'ny vatana, alohan'ny fisehoan'ny sarin'ny klinika. Amin'ny antsalany dia maharitra 14 sy 30 andro izany. Noho izany, rehefa ampidirina amin'ny alalan'ny taratasy mivalona ny rajako, dia hita ao amin'ny 2 herinandro ny marika voalohany amin'ilay aretina. Ao anatin'ny fivoaran'ny aretina, ny chlamydia dia resy amin'ny dingana manaraka:
mivantana mivantana ny mikraoba eo amin'ny moka;
Ny aretin-tsofin'ny moka amin'ny taova, ny fanombohana ny soritr'aretina.
Chlamydia - Ny soritr'aretina
Rehefa tsikaritry ny chlamydia amin'ny vehivavy dia mety tsy ho hita ny soritr'aretina. Ny marary dia tsy mahatsikaritra ny fiovana, tsy misy manelingelina azy. Ny dokotera dia manondro ny tsy fisian'ny fisehoan-javatra manokana momba ilay aretina. Matetika ny psykôlôsy dia voamarina amin'ny fisorohana fisorohana tsy tapaka, fandalinana fofona amin'ny bioflora.
Milaza ny fisehoan'ny klamidiose amin'ny vehivavy, ny dokotera dia manavaka ireto soritr'aretina manaraka ireto:
Mampitombo ny habetsaky ny fitsaboana amin'ny vagin-doha - mahazo karazan-damba izy ireo, fofona tsy mahafinaritra;
fanasitranana marary - mitranga rehefa voan'ny chlamydia ny taratasy mivalona amin'ny urine;
fandehanana an- tsokosoko avy amin'ny vava;
ny fiterahana sy ny jihitra - vokatry ny asa goavana ataon'ny micro micro-organismes;
fiterahana vokatry ny gliokaozy mivalona;
ny fanaintainana ao ambany kibo, tsy mifandray amin'ny fadimbolana.
Ny vehivavy Chlamydia amin'ny vehivavy, ny soritr'aretina azo afenina, dia mitombo ny mari-pana vatana amin'ny 37-37,5 degre. Io trangan-javatra io dia miaraka amin'ny fahasimban'ny fahasalamana ankapobeny. Araka ny antontan'isa, amin'ny 30% amin'ny marary miaraka amin'ny clamidiose voamarika, ny aretina dia tsy misy asymptomatic tanteraka ary voamarina amin'ny fanadihadiana feno. Izany dia mampihena ny fizotran'ny fitsaboana ny aretina, amin'ny tsy fisian'ny chlamydia miteraka.
Chlamydia - soritr'aretin'ny vehivavy, famantarana voalohany
Ny marika voalohany amin'ny klamido amin'ny vehivavy dia mitranga iray volana taorian'ny aretina. Ny vehivavy dia mitombo ny fitomboan'ny tsiranoka ao amin'ny vaginal, izay misy alokaloka tsy mahazatra. Matetika izy ireo dia hosodoko amin'ny lokony maitso, misy vongy ny moka. Rehefa misy ny aretina amin'ny vaginale, dia miova ny fiovan'ny biôlôra, mitombo ny vaginosa bakteria. Ny Chlamydia dia mitombo amin'ny vehivavy izay tsy fantatra amin'ny ankamaroan'ny soritr'aretina. Afaka maka aina tsy mahafinaritra noho izany ny fandoavam-bola.
Matetika ny chlamydia any amin'ny zatovovavy, izay miseho amin'ny soritr'aretina vetivety aorian'ny fiterahana, dia manomboka amin'ny fiterahana. Ny fanjonoana ny lava dia mihamahantra. Vehivavy matetika no mitondra an'io soritr'aretina io ho mariky ny cystitis. Rehefa mandeha any amin'ny dokotera ianao, dia mameno ny mikroflora, dia manambara ny chlamydia. Ireto manaraka ireto ny soritr'aretin'ny klamido:
fahatsapana mampalahelo any aoriana;
jiro mandoro ny vava;
mitombo vatana mari-pana.
Fandotoana amin'ny klamido amin'ny vehivavy
Manambara ny vehivavy momba ny fomba fiasan'ny clamidiose, ny fitsaboana maloto amin'ny toeram-pitsaboana dia mametraka ny loha laharana. Ireo ankizivavy dia manamarika fiovana eo amin'ny rafitra, ny tsy fitoviana, ny lokony ary ny habeny. Ny fanatrehana azy ireo amin'ny habibiana goavambe goavana, manova ny natiora - nanjary mucopurulent. Ny Chlamydia dia manova ny pH-n'ny vava, ka mametraka ny fepetra tsara ho an'ny fitomboan'ny fambolena.
Fandinihana ny klamido amin'ny vehivavy
Alohan'ny handraisana ny fitsapa-kevitry ny klamydia, ny dokotera dia manangona ny tantaran'ny vehivavy. Izany dia manampy amin'ny famaritana mazava tsara ny vanim-potoan'ny aretina sy ny loharano. Ny fomba fampahafantarana amin'ny ankapobeny momba ny aretina dia ny PCR. Izany dia ahitana ny fahitana ao amin'ny santionan'ny fitaovan'ny fototarazo. Izany dia manampy amin'ny fijerena marina tsara ny micro micro-organism, ny habetsahany. Alohan'ny fitondrana ny klamady amin'ny vehivavy, dia omena azy ireo:
fingotra noho ny halehibeny;
Chlamydia - fitsaboana
Ny fitsaboana ny chlamydia amin'ny vehivavy dia midika ho fampiasana fanafody antibaktera. Avy hatrany ireo fanafody ireo dia fototry ny fitsaboana. Ny fitsaboana amin'ny zava-mahadomelina dia maharitra 10-14 andro. Ny faharetan'ny fitsaboana dia miankina amin'ny fotoana fanombohana sy ny dingana amin'ny aretina. Mifanaraka amin'ny fitsaboana antibiotika:
fanitsiana ny tsy fahaleovantena - nomena alalana ny immunomodulators;
fomba fitsaboana manohitra ny fanafody - famafazana, fandroana.
Fitsaboana chlamydia amin'ny vehivavy - zava-mahadomelina, tetika
Ny rafitra fitsaboana ho an'ny klamady dia voafidy manokana. Ny marary dia tokony hanara-maso akaiky ny fandaharam-potoana voatondro: hitandrina ny dosage, ny fatran'ny fanafody, ny faharetan'ny fitsaboana. Ny antibiôtika ho an'ny klamidia dia asiana fanamarihana ny fisian'ny aretina hafa momba ny firaisana ara-nofo, ny fizotran'ny areti-mifindra. Anisan'ny antibiotika tranainy matetika ny:
Azithromycin - 500 mg indray mandeha (takelaka 2) na Doxycycline - 0,1 g isan'andro isan'andro isan'andro mandritra ny 7 andro manaraka;
Erythromycin - 500 mg isaky ny 6 ora mandritra ny 7 andro;
Ofloxacin - 300 mg, indroa isan'andro, 7 andro isan-karazany.
Ny labozia ho an'ny klamido amin'ny vehivavy
Raha miresaka momba ny zavatra sy ny fomba itondrana ny chlamydia, ny gynkologists dia manamarika ny fahombiazan'ny suppositories vaginal. Ity endriky ny zava-mahadomelina ity dia ampiasaina amin'ny fomba fiasan'ny gynecological. Ny famoahana ny hetsika eo an-toerana, ny fanafody dia manafoana haingana ny soritr'aretina, izay mahatonga azy ho mora kokoa hahatsapa. Anisan'ny hevi-teny mahomby ho an'ny klamydia - Hexicon.
Ny fanafody dia nalaina nandritra ny 10 andro, ny maraina sy ny hariva, vehivavy iray mametraka 1 suppository ao amin'ny vagina. Afaka mampiasa ny vokatra ho toy ny faminaniana ianao. Anisan'ireo toetra mahasoa:
fanafoanana haingana ny soritr'aretina;
mihena ny habetsaky ny fiterahana;
Famaranana ny fahasosorana, ny tsy fahampiana ary ny fandoroana ao amin'ny vagina.
Amin'ny fanomanana mahomby amin'ny endriky ny labozia, azo atao ny manamarika:
Ny vokatry ny klamido amin'ny vehivavy
Ny trahomatis Chlamydia amin'ny vehivavy, amin'ny tsy fisian'ny fitsaboana ilaina, dia matetika no mahatonga ny aretina amin'ny taratasy mivalona urogenital. Anisan'ny vokatry ny klamido:
fanjarian-tsakafo ao anaty tavoahangy;
fanovana manosihosy ao amin'ny tendrony uterine;
Chlamydia amin'ny maha-bevohoka
Ny chlamydia amin'ny vehivavy bevohoka matetika dia vokatry ny tsy fisian'ny fampiofanana manokana, fanadiovana ny taova. Raha sendra voan'ny aretina ao anatin'ny fotoana fohy ny mpitsabo, dia mahazatra ny tetikadiny (hatramin'ny 14 herinandro). Amin'ny trimestre 2nd sy faha-3, antibiotika dia ampiasaina:
Erythromycin - 500 mg, isaky ny 6 ora, 7 andro;
Jozamycin 750 mg, intelo isan'andro, mandritra ny herinandro.
Ny Chlamydia dia miantraika amin'ny fizotran'ny fitondrana, ka miteraka fahasarotana toy izany:
fisotroan-dronono amniotic aloha;
Ny fiantraikan'ny tsimokaretina eo amin'ny fiasana (fivontosana klamydia, pharyngitis, otitis media, pnemonia dia mety hiteraka amin'ny zaza vao teraka).
Dysbacteriosis ao amin'ny vagina - soritr'aretina
Epigen dia mamafy amin'ny tongotra
Noho ny fitsaboana dysbacteriosis amin'ny tovovavy?
Tsofy eny an-tratra
Fandrobana ny tratra
Cherry "Valery Chkalov"
Mamafy amin'ny tarehy
Tsara tanana amin'ny famolavolana
Karazan-tsakafo - fanaka
Amal Clooney dia niresaka nandritra ny valandresaka tao Los Angeles nanohitra ny fitondrana tsy ara-dalàna ny fitaovam-piadiana
Mulberry - toetra mahasoa
Hypertensive karazana toetra
Institut et Museum of Voltaire
Inona no haavon'ny lanjan'i Antonio Banderas ao Hollywood?
Ahoana no fomba fitafy any Tonizia ho an'ny mpizaha tany?
The theater puppet
Ohatrinona ny vatana amin'ny laoniny aorian'ny fiterahana?